SpotOn na Poynt: POS Integrated Marketing maka Obere Ahia | Martech Zone
Fraịde, Machị 15, 2019 Fraịde, Machị 15, 2019 Douglas Karr
SpotOn arụnyeworị ihe karịrị 3,000 isi ahịa na usoro nhazi ịkwụ ụgwọ na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ndị na-ere ahịa na salons na mba niile. Ha esorola rụọ ọrụ Poynt iji nye ohere mgbanwe nke ọnụ ahịa ahịa nke na-enyere ndị na-ere ahịa na ndị nwe ụlọ nri aka ịnakọta ozi kọntaktị ndị ahịa ma nara ịkwụ ụgwọ na tebụl, ma ọ bụ ebe ọ bụla ndị ahịa nọ.
Ngwa ahia POS
Ngwa ahia ahia nke SpotOn na-eme ka ọ dị mfe itinye usoro nkwukọrịta na-agbanwe agbanwe yana ndị ahịa gị ka ha wee na-azụkarị azụmaahịa gị ma na-emefu ego karịa mgbe ha mere. Nsonaazụ njedebe abụghị naanị mmekọrịta ka mma n'etiti ndị ahịa gị, kama ọ na-abawanye ego maka azụmahịa gị.
Njirimara nke ahia ahia na iguzosi ike n'ihe nke SpotOn gunyere ikike:
Bubata ndị ahịa dị ugbu a ma nọgide na-eto ya site na ịnakọta adreesị email ndị ahịa ọhụrụ.
Soro ndị ahịa gị kwukọrịta ozi site na email, Facebook, Twitter, na ekwentị.
Mepụta ozi ahia na ngwangwa ma dịkwa nfe site na iji ọkachamara wulite nke ikpo okwu.
Zipu ndi ahia gi ka ha buru ndi nleta ndi ozo.
Mgbasa ozi akpaaka iji kpalite nleta sitere na ndị ahịa dị iche iche, gụnyere ndị ọbịa ọhụrụ, ndị ahịa gị kachasị mma, na ndị ahịa na-agabeghị na nwa oge.
SpotOn anaghị eme ka njikwa ahịa dị mfe, ọ na-enye gị ohere ịmepụta otu iguzosi ike n'ihe na-akwụghachi ụgwọ mmemme, ma jikwaa gị nyocha online. Mgbe ejiri ya na ibe ya mee ihe, ngwa ọrụ ndị a na-enye ndị ahịa gị azụmaahịa a na-eweta usoro dị ike nke jikọtara nke ọma na usoro ndenye ọpụpụ na nchịkọta data.
Ihe a sụgharịrị bụ ike na-etolite ndepụta ndị ahịa gị ma nakọta data gbasara ndị ahịa ahụ. Dị ka ikpo okwu SpotOn gị na-anakọta data ndị ọzọ, ọ ga-adịwanye ike, na-enye gị ohere ịmepụta otu ndị ahịa nkewapụtara ọhụrụ na ikike ịbịakwute ha mkpọsa ahịa zuru oke.
N'elu nke ahụ, nchịkọta dashboard nke ikpo okwu ga-enye gị ohere ịhụ njikọ doro anya n'etiti ndị ahịa, azụmahịa ha, na mkpọsa ahịa gị, na-enye gị ROI doro anya maka mbọ ahịa gị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, SpotOn na-ewe oke ọrụ n'ahịa. You'll ga-amata nke ọma ihe na-arụ ọrụ, yana otu esi emepụta mkpọsa ahịa dị irè karị n’ọdịnihu.
Banyere SpotOn Transact, LLC
SpotOn Transact, LLC (“SpotOn”) bụ ịkwụ ụgwọ ego na-akwụ ụgwọ na ụlọ ọrụ ngwanrọ na-agbanwe ụlọ ọrụ ọrụ ahịa. SpotOn na-eweta nhazi ịkwụ ụgwọ na ngwanrọ itinye aka na ndị ahịa, na-enye ndị ahịa bara ụba data na ngwaọrụ ndị na-enye ha ike ịre ahịa karịa nke ọma na ndị ahịa ha. Igwe okwu SpotOn na-enye akụrụngwa kachasị maka azụmaahịa obere na ọkara, gụnyere ịkwụ ụgwọ, ịre ahịa, nyocha, nyocha na iguzosi ike n'ihe, nke ndị ahịa na-eduzi nlekọta ndị ahịa na-akwado. Maka ama ndị ọzọ, gaa na SpotOn.com.
Banyere Poynt, Inc.
Poynt bụ usoro azụmahịa metụtara
na-enye ndị ahịa ike na teknụzụ ịgbanwe ọrụ ha. Na 2013, ụlọ ọrụ ahụ matara na enweghị smart smart terminals na ahịa ahụ, ọ tụleghachikwara ọnụ ahịa nkwụnye ụgwọ zuru ebe niile na ngwaọrụ ejikọrọ, nke nwere ọtụtụ ebumnuche nke na-agba ndị ọzọ.
ngwa. Dika ebe onu ogugu di nma, Poynt OS bu sistemụ arụmọrụ nwere ike ime ka ikike ịkwụ ụgwọ ọ bụla zuru ụwa ọnụ, mepụta akụ na ụba ngwa ahịa maka ndị ahịa ma kwe ka ndị mmepe dee otu ugboro wee kesaa ebe niile. Poynt nọ n'isi ụlọ ọrụ
na Palo Alto, Calif., Isi ụlọ ọrụ mba ụwa na Singapore, ma na-akwado Elavon, Google Ventures, Matrix Partners, National Australia Bank, NYCA Partners, Oak HC / FT Partners, Stanford-StartX Fund, na Webb Investment Network. Chọpụta ihe na
Tags: mobile ngwaugwo nhaziebe ahịapos ederedepoyntezi okwuntụpọ